Tonga hatreny amin’ny Hopitaly ny mpangalatra sy mpandrava
Nohamafisina ny fanarahamaso ao amin’ny Hopitaly ben’ny Toamasina
Niroso amin`ny fandaminana vaovao ny mpiasa ao amin’ny Hopitaly ben’ny Toamasina, mahakasika ny tsy fahandriapalemana.
Tato ato izay mantsy dia miha-mirongatra ny asa ratsy izay hataon’ireo tsimatahotody ao amin’ny Hopitaly be, ao ny mpangalatra fitaovana izay ampiasain’ny Hopitaly, ao ihany koa ny mpanendaka sy mpangalatra moto, sns.
Araka ny resaka nataon’ny Dr Bezandry, tomponandraikitra ao amin’ny Hopitaly dia efa tsy tery lalana ireo mpangalatra, ka efa miditra aty amin’ny toeram-pitsaboam-bahoaka zareo manao ny asa ratsiny.
Nambarany ihany koa fa efa maro ireo fitaovana very, betsaka koa ny fitarainan’ireo olona tonga mitsabo tena amin’ny fanendahana sy herisetra ary halatra mahazo izy ireo. Fantara mantsy fa manodidina 50 isan’andro ny marary tonga mitsabo tena ao amin’ny Hopital be.
Nisy ny dinidinika nifanaovan’ny tomponan’adraikitra, satria sarotra ny fanarahamaso an’ireo mpivezivezy ao anatin’ny Hopitaly, eo ny mitondra marary, ny fivezivezena amin’ny fividianam-panafody, fanadiovana ireo fitavana ampiasaina, sns hany ka misy manararaotra. Handeha hamangy, ndehividy fanafody, hanatitra sakafon’ny marary, sns, ireo no fika ampiasain’ireo tsy hatahotody hanaovana ny asa ratsiny.
Nandray fepetra ny tomponan’andraikitra ao amin’ ny Hopitaly ben’ny Toamasina, ka ferana ny fivezivezena ao anatin’ity Hopitaly ity.
Ny ora famangina dia:
- Maraina: 5ora hatramin`ny 7 ora maraina
- Atoandro: 12ora hatramin`ny 2ora tolakandro
- Ariva : 5ora hatramin’ny 7ora Alina
Ny mitondra marary
- Niferana ho olona iray, 13 tanao raha kely indrindra no miaraka aminy na manao mpiambina (garde malade), satria manana mpanaramaso ny marary ihany koa ny ao amin’ny Hopitaly be.
- Tsy maintsy atao ny mitondra carnet-n’ilay olona tsaboina ny mpiambina amin’ny fivezivezene rehetra atao amin’ny fitsaboana ao Hopital, amin’ny fivoahana na fidirana ao amin’ny Hopitaly.
Fidirana sy fivoahana
- Noamafisina ihany koa eo amin’ny fihambesana ny vavahady amin’elalan’ny fametrahana mpiambina maromaro, hanaramaso ny miditra sy ny mivoaka.
Napetra ireo rehetra ireo mba hiarovana ireo tonga hitsabo tena eto amin’ny Hopital ben’ny Toamasina hoy ihany ny tompon’andraikitra Dr Bezandry.
(40) Anderson RAVO : 09-05-2014 - 09:00